> Resource> iPhone> Olee ka mmekọrịta Abụọ iPhones ka Onye Computer
N'ihi na ụfọdụ ndị na-achọ ịkọrọ music n'etiti abụọ iPhones, ha pụrụ izute ọnọdụ na mgbe ha na-agbalị ka mmekọrịta abụọ iPhones na otu kọmputa, ihe niile na abụọ iPhones ga-abụ otu, e wezụga music, ma Kalinda na Ndi ana-akpo. Ọ bụ ọdachi ma ọ bụrụ na abụọ iPhones na-nwe dị iche iche ọrụ. Iji nyere aka ọrụ zere nke a na ọnọdụ na-mmekọrịta abụọ iPhones ka otu kọmputa kpamkpam, Wondershare Software ka a tọhapụrụ Wondershare TunesGo. Ọ bụ ọkachamara desktọọpụ iPhone ngwá ọrụ. Ọ na ndị ọzọ ma ọ bụ obere ahụ dị ka iTunes, ma ọ na-enye ohere ọrụ ịkọrọ faịlụ n'etiti iOS ngwaọrụ na a na kọmputa na-enweghị erasing ọ bụla data. Ka na-anya na otú ka mmekọrịta abụọ iPhones ka otu kọmputa na Wondershare TunesGo.
Nzọụkwụ 1. Wụnye TunesGo software
Pịa Download button ibudata TunesGo ikpe version. Ugbu a ma ndị Windows na Mac version maka Wondershare TunesGo dị ibudata. Na-ahọrọ nri otu maka gị na kọmputa. Na-esonụ, Aga m uche na-esi mmekọrịta abụọ iPhones ka otu kọmputa na Wondershare TunesGo (Windows). N'ihi na Mac ọrụ, mgbe na nbudata na wụnye ngwa na gị Mac, na-agụ otú iji Wondershare TunesGo (Mac).
Nzọụkwụ 2. mmekọrịta abụọ iPhones ka otu kọmputa
Na nke a nzọụkwụ, i nwere ike iji Wondershare TunesGo ime ọtụtụ ihe dabere na gị nzube.
Mmekọrịta music ma ọ bụ vidiyo site na kọmputa na-otu n'ime mmadụ abụọ iPhones
Mgbe iji eriri USB jikọọ gị iPhone na kọmputa na-agba ọsọ TunesGo, ị pụrụ ịhụ iPhone na-gosiri na isi window nke TunesGo. Wee pịa Media na ekpe kọlụm na-ekpughe media faịlụ na ụdị. Pịa Music taabụ. Họrọ Tinye File ma ọ bụ Tinye nchekwa mgbe ị pịa triangle n'okpuru Add n'elu nke window. Agagharị na kọmputa gị maka songs na bulite ha gị iPhone. Ọ bụrụ na ndị music ị na-aga nyefee ka iPhone bụ na iTunes, biko ịmụta otú nyefee naanị music site na iTunes Library na iPhone. Na yiri nzọụkwụ, ị nwekwara ike nyefee videos site na kọmputa na iPhone dị ka mma.
Share music ma ọ bụ vidiyo n'etiti abụọ iPhones
Ok, O nwere ike ime na songs na ị na-aga ịkọrọ n'etiti abụọ iPhones na-azọpụta na otu nke iPhones. Na nke a, na Wondershare TunesGo, i nwere abụọ nhọrọ iji nweta ihe mgbaru ọsọ gị.
Ngwọta # 1
Ijikọ iPhone na e dere songs ị chọrọ ịkọrọ gị na kọmputa site na eriri USB. Ẹkedori TunesGo. Pịa Media na n'aka ekpe nke isi window. Pịa Music taabụ ịhụ ihe niile songs na iPhone. Họrọ chọrọ songs na pịa Export. Na ndọpụta ndepụta, họrọ Mbupụ na My Computer. Ịhụ ebe na kọmputa gị iji zọpụta ndị a exported songs. Na mgbe ahụ Ikwupu iPhone na jikọọ ọzọ iPhone. Pịa Media. Na Music window, pịa Tinye File ma ọ bụ Tinye nchekwa mbubata aga na exported songs.
Ngwọta # 2.
Jikọọ abụọ iPhones na kọmputa site na eriri cables. Ha abụọ ga-egosipụta na n'aka ekpe nke window. Ọ bụrụ na ị chọrọ ikere òkè songs ma ọ bụ vidiyo site na otu iPhone ọzọ, pịa Media. Na Music ma ọ bụ Movie window, pịa triangle n'okpuru Export. Na ndepụta ahụ, họrọ Mbupụ na (ọzọ iPhone aha). Ọ bụ ya! Cheta na: Ngwọta # 2 ugbu a bụ nanị maka Wondershare TunesGo (Windows), ọ bụghị Mac version.
Lee otú mfe ọ bụ ka mmekọrịta abụọ iPhones na otu kọmputa. Na Wondershare TunesGo, syncing abụọ iPhones na otu kọmputa mgbe utịp ke kọntaktị furu efu. Ntak ibudata ikpe mbipute inwe a na-agbalị ugbu a!
Olee otú Bugharịa Music si iPad ka Computer